Wasiirka Arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo la kulantey William Hague • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Wasiirka Arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo la kulantey William Hague
Wasiirka Arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo la kulantey William Hague
Photo by: @WilliamJHague
Wasiirka arrimaha dibadda ahna Raysalwasaare kuigeen-ka ee Soomaaliya Fawsiya Yusuf Xaaji Adam oo booqasho rasmi ah ku joogta dalka Ingriiska ayaa la kulantey wasiirka arrimaha dibadda ee Britain William Hague maanta oo Khamiis ah, kulanka ayaa ka dhacay xafiiska William Hague.
William Hague ayaa sheegay in UK ay noqoneyso saaxiib adag oo dadka Soomaaliyeed yeesho, “..Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan la kulmo Wasiirka aarimaha dibadda Fawsiya Yusuf H.Adam, booqashadii u horeysey ee ay ku timaado UK, iyada oo metalaysa dalka Somaliya. Somaliya waxay sameysey horumar xaqiiqo ah bilihii u danbeeyey, dhaniac siyaasadeed iyo mid isbedelba, waxaana horumar laga sameeyey dhanka amniga, iyada oo al-Shabaab lagu khasbey in magaalooyinka waaweyn banaanka laga dhigo..” ayuu yiri Mr.Hague.
Wasiirka arrimaha dibadda ee UK ayaa ballan qaadey in ay Soomaaliya kala shaqeynayaan, arrimaha bii’aadanimada iyo amniga isla markaana ay ahaanayaan kuwo jaal iyo saaxiib la ah Soomaaliya.
Waiirka Arrimaha dibadda ee Soomaaliya Fawsiya Yusuf oo kulanka kadib iyaduna saxaafadda la hadashey ayaa sheegtey, in xukuumaddeeda cusub ay samaysey qorshe shaqo hawleed, taas oo ay ugu muhimsan tahay xaqiijinta amniga, kor u qaadidada caddaaladda, daahfurnaanta arrimaha dhaqaalaha, siyaasadda dib u heshiisiinta iyo hormarinta dhaqaalaha.
Fawsiya ayaa sheegtey in waxyaabaha ay ka wada hadleen wasiirka ay ka mid tahay in dib loo furo saafaraaddii Soomaaliya, sidoo kale waxay sheegtey in Madaxweynaha Soomaaliya uu imaan doono UK shir looga hadlaayo hormarinta Soomaaliyana uu kaga qaybgeli doono halkaas.
Dalka UK ayaa sanadkan haya madaxinimada dalalka ka hormarey dhanka wershadaha ee la isku yiraahdo G8, waxaana ay ballan qaadeen in ay kor u qaadi doonaan deeqaha la siiyo Soomaaliya sanadkan 2013.
Tagged With: Fawsiya